Garoomada diyaaradaha Kenya oo la xirayo Maxaa soo kordhay. — CAASIMADA
Home WARARKA MANTA Garoomada diyaaradaha Kenya oo la xirayo Maxaa soo kordhay.
Nairobi (Caasimadatimes)-Garoomada Diyaaradaha ee Jomo Kenyatta International Airport iyo Wilson Airport oo si Kumeel gaara loo xiri doono maanta oo Khamiis ah.
Garoomada diyaaradaha ee dalka Kenya ee kala ah JKIA iyo Wilson ayaa maanta si kumeel gaar ah loo xiri doonaa munaasabadaha Maalinta Jamhuri owgeed.
Gegada Diyaaradaha Caalamiga ah ee Jomo Kenyatta (JKIA) ayaa la xirayaa hal saac inta u dhexeysa 11ka subaxnimo iyo 12ka duhurnimo xilligaas oo aysan jiri doonin wax duullimaadyo ah oo ka soo dagaya ama ka duulaya.
Maddaarka Wilson, dhinaca kale, waxay isna la xiri doonaa 5-saac ah inta u dhaxaysa 9-ka ilaa 2-da duhur.
Diyaaradda Fly 540 iyo shirkadaha duullimaadyada ee EastAfrican waxaa la ogeysiiyey Arbacadii, waxay kula taliyeen macaamiisha ballansan duullimaadyada xilliyada la xusayay in safarkoodu dib u dhici doono.
Dabaaldegyada Maalinta Jamhuri ee Sannadkan ayaa lagu qabandoonaa Nyayo National Stadium ee Gobolka Nairobi iyadoo dabaaldagu aad u weynaan doono.
Previous articleDegmo ku taalla Jubbaland oo Saddex bilood arin layaable go’doon ugu jirta.
Next articleGolaha Wasiirrada oo ansixiyay Hindise-sharciyeed Wadanka aad muhiim u ah
Dowladda Germany oo Soomaaliya ugu deeqday lacago Malaayina.
SAWIRO:-Ciidamada Somaaliland oo howlgal culus Ku soo qabtey lacago Dollar been-abuur...